सीसी क्यामेरा छल्दै सरकारी वकिलले यसरी घुस लिए, दिल्लीमा भेटिएका युवक आफ्नो भन्दै आउनेको लर्को (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
सीसी क्यामेरा छल्दै सरकारी वकिलले यसरी घुस लिए, दिल्लीमा भेटिएका युवक आफ्नो भन्दै आउनेको लर्को (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४२७ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सरकारी वकिलले नै ५ हजार घुस लिएपछि…
सुनसरी । सुनसरी जिल्लाको सरकारी वलिकको कार्यालय ईनरुवाका एक जना सरकारी वकिलले विचौलिया मार्फत सेवाग्राहीसँग ५ हजार घुस लिएका छन् । जनचेतना युवा समूहका अध्यक्ष कुन्दन पासवानले उक्त भिडियो खिचेर हामीलाई पठाएका छन् । भिडियोमा विचौलियाले मुद्धा मिलाउन पैसा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । वास्तवमा खसी चोरीको मुद्दामा दहबी नगरपालिका वडा नम्बर–६ का सदाम हुसेन, मुकेश पासवान, सोनु पासवान, अनिल यादव र गोवी यादव समातिएका थिए ।
२. दिल्लीमा भेटिएका युवक आफ्नो ‘छोरा’ हो भन्दै तीन परिवार हाम्रो सम्पर्कमा !
काठमाडौं । गत मंगलबारको एपिसोडमा हामीले दिल्लीमा एक युवक आफ्नो अभिभावकसँग छुटेको ११ वर्ष पुगेको र आफू नेपाली रहेको कुरा प्रसारण गरेका थियौं । हामीले रिपोर्ट प्रशारण गरेपछि नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका परिवारले ती युवक आफ्ना छोरा हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । विगत ११ बर्षदेखि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित बाल गृहमा बस्न बाध्य ती युवकका बारेमा रिपोर्टिङ गरेपछि धेरैले यस बिषयमा चासो देखाएका छन् । २००७ सालमा भारतको त्रिलोकपुरस्थित एक मन्दिरमा भेटिएका अनिलले आफ्नो बुवाको नाम प्रकाश बताउँछन् भने आमाको नाम मनसरा बताएका छन् । वास्तवमा आफ्नो नाम थर के हो ? उनलाई थाहै छैन् । अहिले त नेपाली बोल्न पनि बिर्सिसकेका छन् ।
३. बझाङ चैनपुरको बादी परिवारको अवस्था फेरियो
बझाङ । हामीले बझाङको चैनपुरमा रहेको बादी समुदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारबाट निकै पछि परेको, गर्मीमा छाया र बर्षामा ओत लाग्न पनि मुस्किल रहेको अवस्था बारे रिपोर्टिङ गरेका थियौ । बादी समुदायको स्थायी बसोबासका लागि भवन तथा सहरी बिकास डिभिजन कार्यलय बैतडी अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमले दुई लाख ५० हजारको लगानीमा वर्तमान जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष दल बहादुर बिष्टले बाँकी रकम थपेर बादी समुदायलाई बस्नको लागि दुईवटा पक्की भवन निर्माण गरिदिएका थिए ।
कर्णालीमा पहिलाेपटक भिडियो कन्फरेन्स, प्रदेश सरकारका सभामुख शाहीद्धारा सम्बोधन
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको चिन्ता
‘सहकारी ऐन २०७४’ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संशोधनको तयारी
सभामुख विरुद्धको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सुनुवाई गर्ने
राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको द्धन्द नियमित प्रक्रिया हो : अर्थमन्त्री खतिवडा
access_time 4:44 pm
access_time 4:40 pm
दान बहादुर बुढा मुगु, १३ माघ । कर्णालीमै पहिलो पटक प्रदेश सरकार र सरोकारवालाबीच भिडियो
उत्तम पौडेल पोखरा, १३ माघ । भ्रमण वर्ष २०२० को शुभारम्भसँगै उत्साहित बनेका पर्यटन व्यवसायीहरुमा
काठमाडौँ, १३ माघ । सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संशोधन तयारी सुरु भएको छ